Maimaim-poana virtoaly fitendry Irlandey fisehonny-tserasera | Loderi.com
Virtoaly Irlandey fitendry aterineto
Virtoaly Irlandey fitendry maimaim-poana aminny aterineto
Raha mila scotch zavatra aminny Irlandey aterineto, fa eo aminny solosaina na solosaina findainy anglisy fisehonny - tokony virtoaly Irlandey fitendry amin ny ordinatera. Tena mora ampiasaina sy mety. Raha an-toerana dia zavatra tsy tianao na ny zavatra tsy miasa na dia tsy marina - trarantitra ianao, aoka fantany. Tena zava-dehibe ho antsika. Ny fampiasana Loderi.com virtoaly Irlandey fitendry, azonao atao tena maimaim-poana sy an-tserasera: • vao soratany ao aminny toerana tena Irlandey teny anaty aterineto; • mandefa hafatra ho namana mivantana avy aminny toerana; • fikarohana ao aminny Google sy YouTube ao aminny 1 Click (dia hisokatra aminny vaovao varavarankely) • nadika fampiasana Google-mpandika teny ao aminny iray tsindry (dia hisokatra aminny vaovao varavarankely) • manao lahatsoratra iray ao aminny Facebook sy sioka aminny Twitter; • Vonjeo ny fanamarihana hanohy hanoratra taty aoriana (mila login); • Adikao sy ataovy pirinty ny antontan-taratasy.
Fitendrena aminny fitendry virtoaly Irlandey - izany maimaim-poana sy mora
Izahay notsapaina nandritra ny fotoana ela ny toerana interface tsara ho anny Windows sy fitendry Irlandey fisehonny Mba tsy hanahirana anao. Ary ankehitriny isika dia efa matoky ao an-fampiononana, rehefa nitendry antsika Irlandey fitendry aterineto teo aminny efijery ny Monitor. Eto dia afaka mampiasa ny aterineto Irlandey fenitra fitendry (qwerty), phonetic fitendry ary ny iray hafa. Tsy ho ela dia hanampy ny Irlandey fitendry aminny endriky ny abidy. Izany tena mora ny scotch taratasy, handika azy, pirinty sy hamonjy, mba hifandray aminny namany aminny Facebook sy Twitter. Ary mazava ho azy - inona no Internet tsy misy Google fikarohana sy ny lahatsary ao aminny YouTube? Ireo rehetra ireo hetsika dia atao eo aminny tranonkala ao aminny iray Click - hanandrana izany! Koa, dia afaka mamonjy ny antontan-taratasy vita printy (tokony-mitsofoka aminny fampiasana Facebook, Twitter na ny Google), izay hanohy azy ireo taty aoriana.
Ahoana no mba sy mampiasa ny virtoaly Irlandey fitendry eo aminny toerana?
Azonao atao koa ny mametraka eo aminny tranonkala ny rohy, ny bokotra, na ny manontolo virtoaly aterineto Irlandey fitendry - noho izany mila mandika sy petaka ny kaody avy eto ny taona na ny bilaogy. Isika koa misokatra aminny soso-kevitra ho anny endri-javatra ilainao - manoratra fotsiny antsika sy mamaritra Inona no Tsy Ampy (ny antsipiriany kokoa - ny tsara kokoa) - isika dia hanao izay ilainao!
Fandikan-teny avy Irlandey anglisy fitendry aterineto
Ka hampiala ny lahatsoratra mipetaka eo aminny Irlandey fitendry an-tserasera, manindry fotsiny «Dikanteny» sy ny varavarankely vaovao dia hanokatra malaza indrindra eran-tany aminny aterineto mpandika teny aminny Google. Ny Default, ny teny anglisy avy aminny Irlandey, fa afaka mifidy hafa aminny irery ny fisainana mazava.